AMISOM oo qorshaha ku dar-sanaya illaalinta amaanka xaruumaha Turkiga ee dalka Soomaaliya – Radio Daljir
Luulyo 30, 2013 6:20 b 0
Muqdisho, July 30, 2013 – Howgalka AMISOM ee ka shaqeeya nabbada gobollada koonfureed iyo magaalada caasimada ah ee Muqdisho, waxay balan-qaadeen in ay qorshaha ku darsan doonaan illaalinta amaanka xaruumaha Turkigu ku leeyahay Soomaaliya.
Afhayeenka AMISOM Col. Cali Xaamud wuxuu sheegay in ay ka xun yihiin weerarkii khasaaraha geystey ee lagu qaaday xaruunta Turkiga ee Muqdisho, isagoo taas bedelkeeda sheegay in AMISOM ay muujin doonto doorkeeda illaalinta hay?adaha Turkiga ee Xamar.
Col. Xaamud ayaa yiri ?Annagu waxaan diyaar u nahay illaalinta xaruumaha Turkiga, iyo ?hay?adaha ku sugan dalka ee ka socda caalamka oo dhan, ?sidoo kalena waxba ka reeban mayno inaan sugo amnigooda,?
AMISOM ayaa u arragta Al-shabaab in ay ku jiraan wakhti gebo-gebo ah, marka la eego weerarada kooxdu ay ka fulinayso qeybo ka mid dalka, Col. Xaamud wuxuu sheegay in ay weeraradaasi ka turjumayaan heerka liita ee kooxda Al-shabaab madaxa la sii gelayso.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud ayaa dhowaan ka dalbaday shacabka iyo laamaha ?amniga in ay ka shaqeeyaan ilaalinta hay?adaha Turkiga ee gargaarka ka wadda dalka Soomaaliya, waxaana hadalka AMISOM uu imanayaa xili walaac ba?an laga muujiyey weerarkii xaruunta shaqaalaha Turkiga ee Muqdisho.